Shirkad laga leeyay dalka Ciraaq oo dhiseysa dekedda Hobyo+Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
24th May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Maamulka Galmudug ayaa heshiis lagu dhisaayo Dekadda Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay la galeen shirkad laga leeyahay dalka Ciraaq, si loo dar dargaliyo howlaha ka socdo dakadaas.
Heshiiskaani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynha Maamulka Galmudug iyo Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale oo aad u farabadan.
Madaxweynaha maamulka Galmudug, mudane C/kariin Xuseen Guuleed oo heeshiiska kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhismaha cusub ee Dekadda Hobyo uu wax weyn ka badali doono horumarka dhaqaale ee maamulka Galmudug, waxa uuna xusay in shacabka Galmudug ay baahi weyn u qabaan dib u dhiska Dekadda Hobyo oo in muddo ah aanan shaqeyneynin.
“Dekadda Hobyo waxa ay noqon doontaa mid casri ah oo ay ku soo xirtaan maraakiibta casriga ah ee iskagala gooshta biyaha badweynta Hindiya, sidoo kale waxaa ka faa’iideysan doono shacabka Galmudug iyo dowladaha kale ee dariska la ah Soomaaliya” ayuu yiri, Madaxweynaha Maamulka Galmudug, mudane C/kariin Xuseen Guuleed.
Dhanka kale, Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, mudane Nuur oo isana ka hadlay goobta uu heshiiska ka dhacay ayaa sheegay in heshiiskaan lagu dhisaayo dakadda Hobyo uu qeyb ka yahay dadaallada lagu hormarinaayo deegaanada iyo gobollada dalka, si shacabka Soomaaliyeed ay uga soo kabsadaan dhibaatooyinka mudada dheer soo jiitamaayay ee ragaaday guud ahaan dalka, gaar ahaan bartamaha Soomaaliya.
Dhismaha Dakadda Hobyo ayaa waxa ay ku soo beegmeysaa xilli Madaxda Dolwadda iyo kuwa maamulka Galmudug ay wadaan dadaallo lagu hormarinaayo deegaanada maamulkaas oo in muddo ah ay ka jireen dhibaatooyinka wiiqay tallaabo kasta oo ay dadka iyo deegaanka horumar ku gaari lahaayeen.